I-Hydraulic hinge clip-on | Faka uma kuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezingekho emthethweni ngokuhambisana nokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll. Imininingwane ye-Hydraulic Hinge Clip-on | I-Addy ingeza ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zakho.
I-Hardraulic Door Hardraulic Door Hardraulic Door Hinge Clip-on enesisekelo esijwayelekile esivela ku-Addmith Hardware ngentengo enhle yezandla kanye nentengo esebenza ngezindleko
Umkhiqizo uhambisana nezitayela ezahlukahlukene zokubhala kubandakanya imivimbo eqhubekayo, imibhalo evukile, nokubhala kwamagama.
1. Singakwazi kanjani imininingwane eminingi ngokupakisha?
Isampula ye-1.Free: Sinikeza amasampula wamahhala ngokususelwa kwizidingo zakho ezithile zokuhlola ikhwalithi yemikhiqizo yethu. Kubalulekile kithi ukuthola lokho okudingayo ngqo.
I-3.UseThe Trust: Sinabasabalalisi abaningi emhlabeni wonke futhi bajabulela idumela eliphakeme e-US, eYurophu nase-Asia. Njengamanje sinenethiwekhi yokusabalalisa emazweni angaphezu kwangu-20 ngaphezulu kwethu, eYurophu nase-Asia. Sicela usazise ukuthi yini esingakwenzela yona. Uyemukelwa ukuze ube ngumsabalalisi wethu omusha emakethe yakho, ubheke phambili ekubambisaneni okudala isikhathi eside!
Iqembu le-4.profussion: Iqembu lethu elinolwazi kakhulu, iqembu lobuchwepheshe lizokunikeza insizakalo ephakeme yamakhasimende nsuku zonke. Noma nini lapho udinga ukwesekwa komkhiqizo, amasampula, izikhathi zokukhiqiza ezisheshayo, ukuphuma okwengeziwe ... Sihlala silapha kuwe.
Ukujula kwenkomishi ye-hinge
Dia. ye-Hinge Cup
Uhlobo lwendebe etholakalayo
I-45mm / 48mm / 52mm
Ikhava yenkomishi, ikhava ye-ARM
SGS209A - Cover Egcwele, SGS209B - Half Half Cover, SGS209C - Faka
Imvamisa umbhangqwana ngamunye ku-polybag ngezikulufo, ama-100 ngababili ebhokisini le-carton, noma ukupakisha njengemfuneko yakho. Izindleko ezengeziwe zizocelwa ukupakisha okhethekile njengebhokisi elinemibala, ukupakishwa kwe-blister, nokunye.
I-1,0000,000 PCS / Inyanga
4. Lolu hlobo lweHinge lunomsebenzi we-One-Way Force Buffer lusebenze, lungavalwa ngokuzenzakalelayo futhi luvalwe ngobumnene ngemuva kokulicindezela.
5. Idizayini eyisisekelo ingaba ngokwezifiso njengesicelo sakho sokufanisa imakethe futhi kube lula ukuzuza ukuthandwa kwamakhasimende okugcina.
6. Izesekeli Okokuzithandela, zingahlonyiswa ngesembozo esihambelana nengalo, ikhava yenkomishi noma ezinye izesekeli ngokuya ngezidingo zakho.
7. Uphumelele ukudlula izikhathi ezingaphezu kwezinkulungwane ezinhlanu zokuvula ngokuqinile nokuvala ukuhlolwa okuthembekile nokuzikhethela okuhle.